cmus, rairo yekuraira mumhanzi mutambi | Linux Vakapindwa muropa
Vatambi vemimhanzi veLinux havasi kushomeka, iwe unongoda kutsvaga "mutambi" mune ino blog kuti uwane mibairo mizhinji. MuLinux isu tine aya emapurojekiti akasiyana, akadai seGNOME (Mumhanzi) kana KDE (Elisa), pakati pevamwe, asi zvakare iwo akagadzirirwa ako madhesiki akadai lollypop yeGNOME. Vazhinji vavo vane yakanaka mushandisi interface, chimwe chinhu chisina cmus nekuti inoshanda patambo yekuraira (CLI). Mutambi akadaro akakosha here?
Sekureva kwenziyo, zvinoenderana. Tiri kutsvagei? Kana isu tiri kutsvaga raibhurari yakanaka ine zvinoonekwa zvinovhara, cmus handizvo zvatiri kutsvaga. Kana izvo zvatinoda chiri chinhu chine muyananisi, kana, asi vamwe vakawanda vatambi vanoshaya mumwe. Chinhu chinoshanduka kana chatinoda kungoridza mimhanzi yedu nechimwe chinhu chisingapedze zviwanikwa, mune iyo kesi isu tinofarira chimwe chinhu senge cmus.
cmus inoshanda neyekuraira mutsara interface
Iro zita re cmus rinouya kubva kuC * Music Player. Chiedza, haina kubata chero eedu maodhiyo faira, ine yakachena interface uye isu tinogona kudzora zvese nekhibhodi. Iyo ipakeji diki kwazvo inowanikwa munzvimbo dzepamutemo dzezvakasiyana zvekuparadzirwa kweLinux, saka kuisirwa kwayo kuri nyore sekuitsvaga muchitoro che software kana kunyora rairo inoenderana neyedu package package.
Pane imwe chete yaiswa, isu tichazvimisikidza mune terminal nekutaipa "cmus" pasina makotesheni. Panguva iyoyo isu tinopinda mubrowser yako kuwedzera mimhanzi. Kuti tiite izvi tichaenda kune folda uye tinya iyo A kiyi yekuwedzera. Uye sezvo isu tatanga kutaura nezve makiyi, mamwe ese ndeaya:
B: Inotevera track.
Z: Yapfuura track.
S: Shingairira kutamba kwakasarudzika ("shuffle" muChirungu).
MActivate akasiyana akasiyana kurira modes, switching pakati maartist, maalbum nezvose. MuChirungu ndiyo "aaa" modhi nekuti "zvese" ndi "zvese". Kana isu tine iyo "Artist" modhi yakatarwa, ichaita zvachero ichingoita yeavo muimbi, zvichingodaro kumaalbum kana raibhurari yese.
X: Tangazve track.
I: Inodzokera kunzira uye disc yezviri kutamba. Ndokunge, kana tiri kufamba nemuraibhurari, iyo I kiyi inodzokera pakutamba. Izvo zvakati fananei kana kune mamwe maonero e "Ikozvino Kutamba".
/ : Tsvaga. Tinodzvanya kiyi uye tinotanga kunyora. Icho chiri pakarepo.
Chiratidzo chekubvisa (-): Inoderedza vhoriyamu ne10%.
Sum chiratidzo (+)- Inowedzera vhoriyamu ne10%.
Zviri pachena kuti cmus haisi mutambi wevateereri vese, asi icho chinhu chakanyatso kukoshesa mune yakaderera-zviwanikwa zvishandiso. Kana iwe uchifarira, une rumwe ruzivo mu peji peji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » cmus, rairo yekuraira mumhanzi mutambi kune avo vanofarira chimwe chinhu chakareruka kune chimwe chinhu chakanakisa
Inotaridzika! Ini ndichangobva kuwana MOCP zvinoita sei izvi?
Ini handina kuzviedza, asi kwandiri chakavanzika zvinhu zviviri: kuti iwe unogona kutamba mimhanzi mune interface yaunoda uye isingabate iyo yekutanga data. Izvo uye wozvirongedza zvakanaka. Kana zvikadaro, zvinoita sezvakanaka kwandiri.
MuKonsole uchishandisa kupatsanura maonero uye kuchera, zvinoenderana nemusoro wenyaya uri kushandiswa unogona kutaridzika zvakanaka